स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठको सरुवा - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौंः स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठको सरुवा भएको । उनलाई मन्त्रालय तानेर विभागको महानिर्देशकमा १२औँ तहका अर्का प्रमुख विशेषज्ञ डा. दीपेन्द्र रमण सिंहलाई पठाइएको छ ।
त्यसैगरी व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक भोगेन्द्र डोटेललाई पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा तानिएको छ ।
मन्त्रालयले विभागको महानिर्देशकमा १२औँ तहका अर्का प्रमुख विशेषज्ञ डा. सिंह र व्यवस्थापन महाशाखामा हाल राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग केन्द्रका निर्देशक डा.रमेश खरेललाई लगिएको छ । मन्त्रालयले परोपकार प्रसुति गृह थापाथलीका निर्देशक डा. जागेश्‍वर गौतमलाई पनि मन्त्रालय सरुवा गरेको छ । उनको ठाउँमा डा. संगीता कौशललाई लगिएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठ ओम्नी समूहलाई २० प्रतिशत महँगोमा चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि ठेक्का दिँदा विवादमा तानिएका थिए। उनले नै पछि ओम्नीसँगको ठेक्का तोडेका थिए।
ट्याग्स: महेन्द्र श्रेष्ठ, स्वास्थ्य सेवा विभाग